जापानीमा टाइप गर्दा समय बचाउने तरिका | Nepali In Japan
October 30, 2020 February 13, 2022
जापानी व्यवसायिक इ-मेलहरु निश्चित खालको टेम्प्लेट अनुसार लेखिन्छ । तर यसमा कयौं लामो, औपचारिक अभिव्यक्ति हुन्छन् । यसलाई पटक पटक टाइप गर्नु झन्झटिलो र दक्क लाग्दो हुन सक्छ । आजको यस लेखमा हामीहरुले जापानीमा टाइप गर्दा समयको बचत कसरी गर्ने भन्नेबारे बताउन गइरहेका छौं ।
कुनै जमानामा हातले कति धेरै लेख्नु पथ्र्यो । तर अहिले ती दिनहरु पुराना भइसकेका छन् । आजभोली अधिकांश कुरा कम्प्युटर वा किबोर्डमा टाइप गरिन्छ । फलतः जापानी भाषा टाइप गर्नु पनि सजिलो भएको छ । कतिपयलाई त यो अति नै सरल लाग्न सक्छ । तर भर्खरै जापानी भाषा सिकिरहेकाहरु अनि खान्जी बुझ्न गाह्रो हुनेलाई भने पक्कै पनि टाइप बरदान नै हो । जापानी किबोर्डमा अन्य प्रतिक चलाउन सकिन्छ । अनि फंशनका रुपमा परिणत गर्न सकिने इमिटिकन्स पनि हुन्छन् । जस्तै やじるしटाइप गरेर तपाईले स्पेश हान्नु भयो भने नोट वा इमेलमा प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न प्रकारका वाण आउँछ । あせ खान्जीमा परिणत भएर मिठो’ बुझाउने शब्द मात्रै बन्दैन यो काओमोजीमा पनि परिणत हुन्छ । यसलाई लाज, अचम्म वा निराशा व्यक्त गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तै पनि जापानीमा टाइप गर्नु कहिलेकाँही दिक्क लाग्दो हुन सक्छ विशेषगरी औपचारिक भाषामा । आधिकारिक इ-मेलमा प्रयोग गर्ने जापानी लामा लामा वाक्यहरु हुन्छन् । जस्तैः एचआर विभागबाट आएको इ–मेलको उत्तर दिँदा तपाईले पटक पटक何卒よろしくお願いいたします यच お忙しいところ恐縮ですが वाक्यहरु भेट्नु हुनेछ । धेरै पटक यी वाक्यहरु देख्दा अलि दिक्क लाग्न सक्छ ।
संयोगवशः माइक्रोसफ्ट आईएमईमा बिल्ट-इन फिचर छ जसले तपाईको नामको शर्टकट्स बनाउन मद्दत गर्दछ । यूजर डिक्शनरी र एड वर्डज् तपाईले खोज्नु भएको फिचरहरु हुन् । यो कसरी गर्ने भनेर तल हेर्नुहोस् ।
वर्ड रजिष्ट्रेशन फिचर खोल्नुहोस्
शुरुमा माइक्रोसफ्ट आईएमईमा राईट–क्लिक गर्नुहोस् । विशेषगरी अंग्रेजीको ‘ए’ (वा हिरागाना あ) देखिएको ठाउँमा । त्यसपछि मेनुबाट ‘एड वर्ड’ ( जापानीमा単語の登録 ) रोज्नुहोस् ।
कष्टम वर्डज्मा राख्नु होस् ।
अर्को चरण भनेको तपाईको कष्टम वर्ड दर्ता गर्ने हो । ‘डिस्प्ले’मा तपाईले परिणत गर्न खोज्नु भएको अक्षरहरु लेख्नुहोस् अनि ‘रिडिङ’ तपाईले किबोर्डमा टाइप गर्ने अक्षर लेख्नुहोस् । अन्त्यमा, तपाईले गर्न खोज्नु भएको रुपान्तरणलाई शुद्ध बनाउनका लागि ‘पार्ट अफ स्पिच’ राज्नुहोस् । यसमा व्यक्तिको नाम, ठाउँको नाम र अन्य विकल्पहरु पनि हुन्छ ।
माथि स्क्रिनशटमा देखाइएको जस्तै यसमा तपाईले ट्रिक पनि गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईले जापानीमा समान नभएका शब्दहरु पनि थप्न सक्नु हुन्छ । तपाईले देख्नु भएकै होला जापानीमा धेरै होमोफोन्स ( उस्तै खालको उच्चारण गरिने फरक फरक शब्दहरु ) र एउटै वाक्यांशको विविधता हुन्छन् । यसको कारण तपाईले कष्टम-रजिष्टरिङ वर्ड्ज गरेपछि पनि केही विकल्पहरु स्क्रोल गर्नु पर्ने हुन सक्छ । प्राकृतिक रुपमा रोमन अक्षरमा सकिने कुनै जापानी शब्द छैनन् । त्यसैले यिनीहरुलाई तपाईले प्रयोग गर्ने वाक्यांश, प्रतिक वा शब्दमा राख्नुको अर्थ तपाईले चाहेको नतिजा सधैं तत्कालै पाउनु हुन्छ भन्ने हुन्छ । तपाईले जस्तैः 何卒宜しくお願い致しますवा 何卒よろしくお願い申し上げますको सट्टामा खान्जी र कानामा सन्तुलन हुने अनि नम्र देखिने खालको तर तटस्थ खालका लवज जस्तै 何卒よろしくお願いいたしますको पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
आफ्नो छुट्टै शर्टकर्ट्स बनाउँदा एकल शब्द वा परम्परागत वाक्यांशमा सीमित बस्नु पर्दैन । जस्तै एचआरसँग कुराकानी गर्दा तपाईले आफ्नो विश्वविद्यालयको नामको साथसाथै विभाग अनि आफ्नो पहिलो र अन्तिम नामबारे पनि पटक पटक लेख्नु पर्नेहुन्छ । यी कुराहरु मेलको शुरुमा पनि प्रयोग गरिन्छ । तपाईले आफ्नो परिचय दिइसकेको भएपनि यी कुराहरु दोहोरिन्छ । गैर-जापानी विश्वविद्यालयहरुमा भने काताकानामा टाइप गर्न गाह्रो हुन्छ । अनि शब्द संयोजन कहिलेकाँही निकै लामो बन्न जान्छ । त्यसैले エクサンプル大学・商学部・経営学科のボブ・ミラー लेख्नु पर्दा शर्टकर्टका रुपमा 大学 का लागि だいｇ वा 名前 का लागि なｍ किन नराख्ने ?
तपाईले रजिष्टर गर्नु भएको शब्दलाई एकल नै मानिन्छ । त्यसैले तपाईले इमेलको पूरै हिस्सालाई लाइन ब्रेक अनि अरु कुरा राखेर डिफल्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईले चलाइरहनु भएको इमेल सेवाको टेम्प्लेट क्रियशन फिचरको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
लेख्न शुरु गरौं है त !
आफूलाई चाहिने शब्दावली र वाक्यांशको शर्टकट मिलाइसकेपछि गर्न बाँकी एउटै काम भनेको लेख्न शुरु गर्नु हो । कष्टम शब्दहरु परिवर्तन गर्न वा मेट्न चाहनु हुन्छ भने आईएमईमा राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यूजर डिक्शनरी टूल प्रयोग गरेर हेरफेर गर्नुहोस् । कष्टमाइज्ड शर्टकर्टको सहायताले बिजनेश इमेल लेख्न निकै सहज हुनेछ । तर परिस्थितिअनुसार तपाईले सधैं डिफल्ट अप्शन प्रयोग गर्न नचाहन पनि सक्नु हुन्छ । जस्तैः एचआर हाकिमलाई सम्बोधन गर्दा औपचारिक वाक्यांशहरु प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । अभिनन्दन गर्दा यस्तो स्टक फ्रेजहरु सुरक्षित भएपनि कहिलेकाँही भने तपाई डिफल्ट फ्रेजमा धेरै नै भर परेको हो कि भनेर मानिसहरुले छर्लङ्गै छुट्टयाउन सक्छन् । टेम्प्लेट नै कपी पेष्ट गर्ने जस्ता गतिविधि भने गरिरहनु हुँदैन । शर्टकर्ट कि समय बचाउने सामान्य तरिका हो । तर यसकै भर परेर अल्छी बन्ने काम भने नगर्नुहोला ।
यो लेख तपाईहरुलाई पक्कै पनि उपयोगी भयो भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । जापानी लेख्दा पर्सनल कम्प्युटरको प्रयोग गर्नु सजिलो र सहज हुन सक्छ । तर हाम्रो सुझाव भने हातले लेखेर अभ्यास गर्नुहोस् भन्ने छ । हामी डिजिटल युगमा भएपनि ठेगाना लगायत केही कुरा भने हातले नै लेखेर भर्ने पर्ने हुन्छ । त्यसैले हातले लेख्ने बानी पनि छाड्नु हुँदैन । हातले लेख्दा लेखेको कुरा सम्झिन्छ । हातले लेख्दा खान्जी मात्रै होइन तिनको अर्थ पनि सम्झिन सजिलो हुन्छ ।
Prevडाक्टरलाई आफूलाई भइरहेको दुःखाईबारे कसरी बताउने ?
Nextकिन जोडिदैंछ ड्राइभिङ लाइसेन्सलार्ई माइनम्बर कार्डसँग ?